News Headline | Artist Khabar | Page 112
News Headline	नायिका शिखाले गरीन् आत्महत्या	जेठ, काठमाडौं । नायिका तथा मोडल शिखा जोशीले आत्महत्या गरेकी छिन् । मुम्बईमा रहेको आफ्नो फ्ल्याटमा आफुलाई चक्कु प्रहार गरी आत्महत्या गरेको समाचार बाहिर आएको छ । ४० वर्षे नायिका शिखाले २०१२ मा प्रदर्शन भएको फिल्म 'बीए पास'मा छोटो भुमिका निभाएकी थिईन् ।
प्रहरीका अनुसार शिखाले आत्महत्या गरेको तर कुनै पनि सुसाईट नोट भने लेखेकी छैनिन्..	युवाले चाहे असम्भव केहि छैन, ३ दिनमा बन्यो ३० घर	जेठ, काठमाडौं । भुकम्प पिडितहरुको लागि अस्थायी घर निमार्ण गर्ने उद्देश्यले बिगत तिन दिन देखि अनबरत रुपमा लागेका चलचित्रकर्मिहरुले ३ दिनमै ३० घर निर्माण गरेका छन् । 'हामी सबैका लागि' भन्ने अभियानका साथ अस्थायी घर बनाउने अभियान थालेका चलचित्रकर्मिहरुले काभ्रेको रामपुर डाँडामा तिस घर निर्माण गरीसकेको बताएका छन् । ७ दिनमा ४० घर निर्माण..	डा. भोला रिजालको भुकम्प गित ‘किन यति निर्दयी आज’	जेठ, काठमाडौं । बैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्प पछि नेपालको वर्तमान दर्दनाक परिस्थितिलाई लिएर विभिन्न सर्जकले म्युजिक भिडियो निर्माण गरिरहेका बेला अष्ट्रेलियामा बस्दै आएकी आकृति आचार्यले पनि भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई लिएर एउटा म्यूजिक भिडियो तयार पार्नुभएको छ ।
शिखर सन्तोषको संगीत रहेको ‘किन यति निर्दयी’ बोलको गीतमा आकृति..	सन्नी लियोनलाई देश निकाला गर्नुपर्ने माग	जेठ, मुम्बई । पुर्वपोर्न स्टार तथा अभिनेत्री सन्नी लियोन लाई हिन्दु जनजागृति समाज (एजचेएस) लेभारतवाट देश निकाला गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सन्नीले महिलाको गरिमाको अपमान गरेको र वेवसाईटमा अश्लिता फैलाएको कारण उनलाई देश निकालाको माग गरीएको हो । एचजेएसका प्रवत्ता उदय धुरीले ठाणे डोबीवलीस्थित रामनगर प्रहरी प्रमुख प्रमुख सुनील शिवडकरसंग..	निर्देशक शोभित बस्नेतको बाबुको निधन	जेठ, काठमाडौं । निर्देशक शोभित बस्नेतका बाबु कर्णमान सिंहको ९२ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको शुक्रबार राति ८ बजे निधन भएको हो । निर्देशक बस्नेतले शुक्रबार रातिनै आफ्नो बाबुलाई दागबत्ती दिनुभयो । सँगे थुप्रै चलचित्रकर्मिहरुको आर्यघाटमा उपस्थिती रहेको थियो ।
शोभितका पिताले जम्मा ३३ वटी श्रीमती भित्राएका थिए जसमध्ये ३२ वटी..	चलचित्रकर्मिहरुले धमाधम बनाउन थाले काभ्रेमा अस्थायी घर	जेठ, काठमाडौं । कलाकारहरुले बिभिन्न तबरबाट सहयोग गरीरहने क्रममा चलचित्रकर्मिहरुले काभ्रेमा हामी सबैका लागि’ भन्ने अभियानका साथ अस्थायी घर बनाउने अभियान थालेको छन् । उनीहरुले काभ्रेको रामपुर डाँडामा ४० अस्थायी घर बनाउने भएका हुन् । सो कार्य आजै बाट सुरु भएको छ ।
अभियानका सदस्य निर्देशक सुरेश दर्पण पोख्रेल ले दिएको जानकारी अनुसार..	रक्सी पिएर अभिनेत्री दिपिका माथि निर्देशकको जबरजस्ती	बैशाख, काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोन लाई निर्देशक होमी अडजानियाले जबरजस्ती चु्म्वन गरेका छन् । केही दिन अगाडी मात्रै निर्देशक होमीले आयोजना गरेको पार्टीमा बिभिन्न कलाकारहरुको उपस्थिती थियो । चलचित्र फाइंडिग फैनी चलचित्रको शुटिङ सकिएको खुसीमा उनले पार्टीको आयोजना गरेका हुन् । जुन फिल्ममा अभिनेत्री दिपिका पनि रहेकी छिन्..	हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलको जन्मदिन (फोटो फिचर)	बैशाख, काठमाडौं । हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले आफ्नो ४२ औं जन्म दिन मनाउनु भएको छ । बैशाख २९ गते परेको आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा कलाकार मनोज गजुरेलले नेपालमा परेको ठुलो बिपत्तीको बेलामा आफ्नो जन्मदिन धेरै खुलेर गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले राष्ट्र्यि शोकलाई शक्तिमा बदलेर संयुक्त रुपमा सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने संकल्प सहित शुभ..	गायक सत्य र स्वरुपको भुकम्प बिशेष गित (भिडियो)	बैशाख, काठमाडौं । नेपालमा गएको महाभुकम्प पछि बिभिन्न किसिमका गितहरु बजारमा आईरहेका छन् । यसै बिच गायक स्वरुप राज आचार्य र सत्यराज आचार्यको भुकम्प बिशेष गित 'दिप बनोस' बजारमा आएको छ । जसमा सत्य र स्वरुपको स्वर रहेको छ ।
गितमा भुकम्पबाट निराश भएर हैन सबैमिलेर अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ जस्ता सन्देश दिएको छ । गितमा राजनराज सिवाकोटीको संगीत,..	सन्नी लियोन जेल जाने सम्भावना, कारण यस्तो छ	बैशाख, काठमाडौं । पुर्व पोर्न स्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सनि लियोन जेल जाने सम्भावना देखिएको छ । सन्नी लाई पोर्न साईट चलाएको आरोप लागेको छ । जसमा उनको न्युड फोटो र भिडियोहरु छन् । सन्नी माथि पोर्न साइट चलाएको भन्दै मुद्धा परेको छ । उनी विरुद्ध प्रहरीमा एफआइआर दर्ता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
यस्तो काम गर्ने व्यत्तीलाई..	Pages:«1...108109110111112113114115»